SPM News: Somali 5.12.22
Published May 12, 2022 at 3:01 PM CDT
Iowa's COVID-19 isbitaal dhigis waa sii kordhayaan. Taasi waa marka loo eego tirooyinka federaalka ee ugu dambeeyay.
Ilaa maanta, 124 reer Iowan ah ayaa cusbitaalka la dhigay fayraska. Kor u kac weyn oo ka yimid tiradii usbuucii hore ee 68.
Iowa sidoo kale waxay aragtay koror ku yimid baaritaanada COVID togan ee la soo sheegay todobadii maalmood ee la soo dhaafay.
Daraasad federaali ah oo kii ugu horeysay ee nooceeda ah oo lagu sameeyay iskuulada hoyga ah ee Ameerikaanka ah oo in ka badan qarni la doonayay in lagu dhex daro carruurta asaliga ah ee bulshada caddaanka ah ayaa lagu ogaaday in ka badan 500 oo arday ah oo ku dhintay xarumaha ilaa hadda, laakiin saraakiisha ayaa sheegaya in tiradaasi ay si aad ah u kori karto. cilmi baaris ayaa sii socota. Waxa jiray dhawr dugsi oo hoy ah sida Nebraska iyo South Dakota.
Labo ka mid ah saraakiisha fulinta sharciga ee South Dakota ayaa loo magacaabay guddi federaali ah oo loo xilsaaray inay gacan ka geystaan hagaajinta sida dowladdu wax uga qabato mashaakil tobanaan sano socday oo maqan iyo la dilay Dhaladka Mareykanka ah iyo Dhaladka Alaska. Taliyaha Bilayska Magaalada Degdegga ah Don Hedrick iyo Kaaliyaha Kormeeraha Xeer Ilaaliyaha Mareykanka Gregg Peterman ayaa ku biiri doona guddiga ku dhawaad 40 saraakiisha fulinta sharciga, hogaamiyayaasha qabaa'ilka, shaqaalaha bulshada iyo kuwa ka badbaaday rabshadaha.
Mid ka mid ah shirkadaha soo jeedinaya in la dhiso dhuumaha kaarboonka ee loo maro Iowa ayaa ku dhawaaqday inay kor u qaadday mashruuceeda in ka badan hal bilyan oo doolar.
Summit Carbon Solutions ayaa sheegtay in shirkaddu ay 300 milyan oo dollar ka heshay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo TPG Rise Climate taasna waxay dhamaystiraysaa lacag ururinta dhuumaheeda.
Shirku waxa uu qorshaynayaa in la dhiso dhuumo lagu raro kaarboonka lagu qabto dhirta ethanol ee Midwest si loo kaydiyo dhulka hoostiisa ee North Dakota.